ဇူလိုင်လ 10 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ခြင်းဗျူဟာ 2022 ခု - ကုန်သွယ်မှု2ခု လေ့လာပါ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ရက်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများ!
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31 မေလ 2022
နာမတော်ကိုရည်ညွှန်းသကဲ့သို့, နေ့ကုန်သွယ်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးရာထူးဝယ်နှင့်ရောင်းဖို့သင်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, တသမတ်တည်းနှင့်ကောင်းစွာထင်နေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကြိုတင်စဉ်းစားထားခြင်းမရှိသေးသောအရေးကြီးသောကုန်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစတင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထား ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွားခြင်းမှငွေရှာရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအချို့ကိုအတူတကွပြုလုပ်ထားပါသည်။ သင်သည် Forex၊ crypto၊ စတော့များ၊ သို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုကုန်သွယ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား - Learn2Trade မှသင်လေ့လာသည်။
Day Trading ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
အခြေခံအားဖြင့်တော့နေ့အရောင်းအဝယ်ဆိုတာအွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဟာကုန်သွယ်ရေးနေ့မကုန်ခင်နေရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်။ အစဉ်အလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဆင်းမှုဖြစ်သောစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်မတူဘဲတစ်နေ့တာ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုင်တွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအစားရာထူးများကိုနာရီများသို့မဟုတ်မိနစ်ပိုင်းများတွင်ပင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
တစ်နေ့လုံးကုန်သွယ်မှု၏တိုတောင်းသောကာလအရောင်းအ ၀ ယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နေ့စဉ် (သို့) ရာနှင့်ချီသောတစ် ဦး ချင်းအမှာစာများကိုနေ့တိုင်းထားနိုင်သည်။ တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်မှာအကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်မူ၎င်းသည်တစ်နေ့လုံးအနိုင်ရရာနေရာများစွာသို့ ဦး တည်သွားနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သင်ဟာအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး လား (သို့) နေရာအသစ်အတွက်အသစ်စက်စက်ဖြစ်မလားဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတိုင်းဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မလုပ်သင့်သည့်အရာတွင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသင်ခန်းစာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဟာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအစုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
နံပါတ် ၁– ဘယ်နေ့ကုန်သွယ်ရေးအတွက်မည်သည့်စျေးကွက်ကိုနားလည်မည်ကိုနားလည်ပါ
ယနေ့ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင့်အား 'T' နှင့်သင့်တော်မည့်စျေးကွက်အချို့ရှိသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးခြေတစ်လှမ်းကိုမတွေ့မချင်းပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသာဖြင့်သာစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောနည်းပညာ၏ထူးကဲသောတိုးတက်မှုများကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှသင်ရွေးချယ်ရန်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများမြောက်မြားစွာရှိသည်။ စတော့ရှယ်ယာများမှသည် Forex နှင့် cryptocurrency အထိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှာဖွေသည့်လူကြိုက်အများဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်အချို့ကိုစုစည်းလိုက်သည်။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်ပုံကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုပ်ပုံများပေးရန်သင့်တွင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။
သင် cryptocurrencies ကုန်သွယ်လိုလျှင်သင်ရရှိနိုင်စျေးကွက်အတော်လေးအများကြီးရှိပါတယ်။ Forex ကဲ့သို့ပင် crypto market သည် ၂၄/၇ ဖွင့်လှစ်ထားသဖြင့်နေ့ကုန်သည်များအကြားလူကြိုက်များလာသည်။ ဒုတိယထုတ်ကုန်များကသင့်အားကျဆင်းခြင်းနှင့်ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချရန်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ အခြားဒင်္ဂါးပြားများသည်လည်းမတည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့နေ့ကုန်သည်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်ထိုအရာကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။
ရေတိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်နေ့ကုန်သွယ်ရေး cryptocurrencies သည်နေ့ချင်းညချင်းရန်ပုံငွေနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခကြေးငွေများကိုသင်ကျော်လွှားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်ပေါက်စျေးနှင့်တစ်ပြေးညီပြောင်းလဲမှုကိုစိုးရိမ်ရန်ညဘက်တွင်အိပ်ရန်မလိုပါ။
၏ထိပ်တွင် Bitcoinခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ရောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ အခြား cryptocurrencies တစ်ချို့ရှိပါတယ် – ဥပမာ-
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုနှင့်အတူပါလာသည့်အသုံးအများဆုံးအင်္ဂါရပ်များ cryptocurrencies စျေးကွက်:
အနိမ့်မြို့တော်လိုအပ်ချက်များ: cryptocurrencies နှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်သင့်အားအရင်းအနှီးအနည်းငယ်သာရှိသောစျေးကွက်တွင်ပါဝင်ရန်သင့်အားကူညီသည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ: ယနေ့ခေတ်တွင် crypto day trader တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင့်အတွက်လက်လှမ်းမီမှုများစွာရှိပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များစွာရှိသည် - သင်ကြိုက်သလောက်နေ့တိုင်းသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများ: cryptocurrency စျေးကွက်အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများအတက်အကျသည်သင်တို့အတွက်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူကအခြားလမ်းကိုသွားနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖန်တီးနိုင်သည့်အန္တရာယ်အမြဲရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် နည်းပညာကို စွဲဆောင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွန့်စားမှုတစ်ခုကို ခံယူရန် စိတ်မ၀င်စားပါက၊ cryptocurrency စျေးကွက်များသည် သင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် crypto နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ဖုံးအုပ်ထားသော ဘလော့ဂ်အချို့အတွက် ရေးသားခြင်းဖြင့် သင်၏အတွေ့အကြုံများကို အခြားသူများအား မျှဝေလိုပါက၊ ထိုရှာဖွေမှုပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် cryptocurrency ရေးပါ။ google တွင်၊ ထို့နောက် SERP တွင်ပေါ်လာသောဝဘ်ဆိုဒ်များသည်သင်၏ဦးတည်ရာဖြစ်သည်။
နေ့ကုန်သွယ်ရေးစတော့များသည်ကုန်သည်အသစ်များ ဦး စားပေးသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင်သည့်ရှယ်ယာအမြောက်အမြားရှိသည်။ အစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ပိတ်ထားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်သည် 'gapping risk' နှင့်ဝေးဝေးနေရန်သေချာစေသည်။
သတိမထားမိသူများအတွက် t gapping risk ဆိုသည်မှာအစုရှယ်ယာစျေးနှုန်းကိုယခင်ကုန်သွယ်ရေးနေ့ကုန်ဆုံးချိန်ကထက်များစွာနိမ့်ကျသည်သို့မဟုတ်မြင့်မားသည်။ ဤမြေပုံထုတ်ခြင်းအတွက်ရှင်းပြချက်သည်ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများသို့မဟုတ်နေ့ချင်းညချင်းအခြေခံသတင်းများသို့ရောက်ရှိပြီးကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
စျေးကွက်ဖွင့်ချိန်နာရီကန့်သတ်ချက်များကြောင့်နေ့အရောင်းအဝယ်ညွှန်းကိန်းများသည်ကုန်သွယ်မှုကိုမျှဝေရန်မတူပါ။ အရောင်းအဝယ်ညွှန်းကိန်းများအရ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ၊ သင်မည်သို့တစ် ဦး အပေါ်ထင်ကြေးနေကြသည် အုပ်စု အစုရှယ်ယာတွေစုဆောင်းနေကြတယ်။
FTSE 100 (လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောကုမ္ပဏီများ) ကို ကျေးဇူးတင်၍ စတော့ဈေးကွက်၏ကြီးမားသောနေရာကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ငွေသားအညွှန်းကိန်းများသို့မဟုတ်အနာဂတ်အညွှန်းများမှတစ်ဆင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်အား FTSE 100 နှင့်အလွန်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စေသည်။ အခြား ဦး ဆောင်သည့်အညွှန်းကိန်းများမှာနယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း၊ NASDAQ နှင့်တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းတို့ဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းလမ်းနှစ်ခုမရှိပါ - ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အများဆုံးငွေကြေးအကျပ်အတည်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးသည် EUR / GBP သို့မဟုတ် AUD / NZD စသည့်အတွဲလိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ Wရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်းရွေးချယ်ထားသောလက်တဆုပ်စာသာသင့်အားတစ်နေ့တာအတွင်းအကျိုးအမြတ်များပေးရန်လုံလောက်သောအရည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုနေ့ကုန်သည်များသည်ငွေလဲနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုမှအမြတ်အစွန်းကိုရယူရန်ကြိုးစားကြသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ငွေကြေးသည်အခြားငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်သို့မြင့်မားစွာရွေ့လျားသွားမည်ဟုသင်ထင်သောအခါ၎င်းသည်သင်ဝယ်။ ရောင်းကောင်းနိုင်သည်။
Forex စျေးကွက်အတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည့်အထိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောလက္ခဏာအချို့ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်သည်။
ကော်မရှင်မရှိ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်သည် Forex trading ဖြင့်ကော်မရှင်ကိုပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအကြောင်းပြချက်မှာ Forex ပွဲစားများသည် ၀ င်ငွေရှာသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပျံ့နှံ့ သငျသညျစျေးကွက်ကုန်သွယ်ကိုးကားများအတွက်ပေးဆောင်။
အချိန်မရွေးကုန်သွယ်ရန်: Forex စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်။ ဖွင့်ချိန်နှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။ Forex စျေးကွက်သည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်လုံးလုံးအဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကုန်လွန်ခဲ့သောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောစျေးကွက်ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရန်မလိုသောသူများအတွက် Forex သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုးရာစတော့ဈေးကွက်သည်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရှိနိုင်သော်လည်းပေါင် ၅၀ သာလျှင်သင်ငွေကြေးရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
အနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များအပြင်နည်းပညာအကူအညီနှင့်အခမဲ့သောနည်းဗျူဟာများအပြင် Forex market သည်ကုန်သည်များအတွက်အများဆုံးလက်လှမ်းမီနိုင်သောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex trading၊ နေ့အရောင်းအဝယ်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက Learn2Trade ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Forex တွင်အထောက်အကူပြုသောအချက်အလက်များစွာကိုရှာနိုင်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် 'အနာဂတ်' ဆိုတာဟာ ၀ ယ်သူနဲ့ရောင်းသူတစ် ဦး အကြားစာချုပ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်) ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းနှင့်ရက်စွဲတစ်ခုတွင်တိကျသောကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အမိန့်နှင့်ဆက်စပ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤအနာဂတ်အတွက်အချိန်အတန်ကြာလိမ့်မည်။
တစ်ရက်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်စျေးကွက်အတွင်းရှိမည်သည့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုမှမဆိုအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရောင်းရောင်းဝယ်မှုစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသည့် အချိန်မှစ၍ ရာထူးပိတ်ချိန်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနာဂတ်စာချုပ်များကိုအသုံးပြုသောကုန်သည်နှစ်မျိုးဖြစ်သောစျေးကစားသူများနှင့်ဟတ်ဒါများရှိသည်။
အဖိုးတန်သတ္တုများ – ရှေ, ငှေပလက်တီနမ်၊ အလူမီနီယံ ကြေးနီသံမဏိနှင့် ယူရေနီယမ်ပင် (ရောင်းဝယ်လေ့မရှိသော)၊
အနာဂတ်၏စိတ်ကူးသည်ကုန်သည်များအတွက်မရေရာမှုနှင့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာလာမယ့်နှစ်မှာသင်တစ်တန်ပြောင်းတစ်တန်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတာသိရင်စျေးနှုန်းနဲ့ပြောင်းကိုရောင်းနိုင်မယ်။ လာမည့်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းပြောင်းဈေးကျဆင်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိပြီးစျေးကွက်ပေါက်စျေးကျဆင်းသွားသည်။
သင်၏ဈေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ပြောင်းကိုရောင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းသည်သင်၏တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည် ယခု။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြတ်အစွန်းတစ်ခုရရှိစေမှာပါ။ အဖြစ်ဝေးဘဏ္goာရေးစျေးကွက်သွားအဖြစ်, အနာဂတ်ကုန်သွယ် တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့, ကသဘောတူညီခဲ့သည့်ရက်စွဲနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းကိုအသုံးပြု။ လိုင်းဆင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဘဏ္productာရေးထုတ်ကုန်ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Layman ၏ဝေါဟာရများအရသင်သတ်မှတ်ထားသောအညွှန်းကိန်းသည်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်၍ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းထပ်မံရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ငွေရေးကြေးရေးထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်တူရိယာများတွင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၊ ငွေသွင်းလက်မှတ်နှင့်ဘဏ္uryာရေးဥပဒေကြမ်းတို့ပါဝင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ဘဏ္financialာရေးအနာဂတ်စာချုပ်များ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးအတိုးနှုန်းမှကွဲပြားခြားနားသော ဦး တည်ချက်အတွက်ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒါဟာစဉ်းစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာစေသည်ဒါကြောင့်!
အနာဂတ်စျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်သင်စဉ်းစားသင့်သည့်အခြားအရာများရှိပါသည်။
အနာဂတ်မြို့တော်: အနာဂတ်တွင်စတော့စျေးကွက်ကုန်သွယ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအနိမ့်ဆုံးအရင်းအနှီးလိုအပ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများကသင်အနာဂတ်နှင့်အတူအနည်းဆုံးပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ကွဲပြားသောအနာဂတ်စာချုပ်များသည်မတူညီသောအရင်းအနှီးလိုအပ်လိမ့်မည်။
အနာဂတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: Wနေ အနာဂတ်စျေးကွက်များပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တိကျသောအနာဂတ်ကန်ထရိုက်ကိုမရောင်းမီသင်မည်သည့်ရာထူးတွင်မရှိတော့ကြောင်းအမြဲတမ်းသေချာပါစေ။ အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့်အာရှကုန်သွယ်ရေးကဏ္inများတွင်မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အသံအတိုးအကျယ်မြင့်မားသောကြောင့်အနာဂတ်တွင်ကြိုတင်စျေးကွက်နှင့်စျေးကွက်နောက်ပိုင်းစျေးကွက်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျဉ်းမြောင်းသောအနာဂတ်စာချုပ်များ - အနာဂတ်စျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသူများသည်တိကျသောအနာဂတ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိသဖြင့်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုမတူကွဲပြားမှုကိုသင်မတွေ့ရပါ။ သင်သည်အသံပမာဏနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများကိုပါလိုက်နာပါကကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်တစ်ခုတွင်သင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပိုကောင်းနိုင်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် စွမ်းအင်နဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကုန်စည်သို့မဟုတ် ရေနံဈေးကွက်များ – ထို့နောက်တွင် သင်သည် အနာဂတ်ကို စွဲမက်ဖွယ်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်စာချုပ်အချို့တွင် သင်၏အာရုံစိုက်မှုကို ကျဉ်းမြောင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အရင်းအနှီးပမာဏ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
ပွဲစားပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်ကုန်သည်များကို 'ရွေးချယ်စရာစျေးကွက်များ' တွင်ရောင်းဝယ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ရွေးချယ်မှုစာချုပ် (သို့) သဘောတူညီချက်သည်သင့်အား 'လေ့ကျင့်ခန်းနေ့' (ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲ) ၏သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
စတော့အိတ်ချေါရွေးချယ်မှု: ကိုင်ဆောင်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ကာလအထိသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချသူထံမှစတော့ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ အခြေခံစတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းတက်လျှင်, ထိုနည်းတူခေါ်ဆိုခ option ၏တန်ဖိုးကိုလည်း။
စတော့ရှယ်ယာထားရွေးချယ်မှု ဤရွေးချယ်စရာစျေးကွက်၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူပိုင်ရှင်သည်ယခင်ကသဘောတူထားသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်စတော့ရှယ်ယာများကိုရောင်းနိုင်သည်။ တနည်းကား, ဒီသတ်မှတ်ထားသောနေ့စွဲမတိုင်မီဖြစ်ရပါမည်။ နောက်ခံစတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းကျဆင်းပါက, ဒါကြောင့် put option ၏တန်ဖိုးကိုလည်းကျဆင်း။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်စျေးကွက်တစ်ခုစီသည်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရန်သင့်တော်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင်မည်သည့်စျေးကွက်နှင့်မည်သည့်စျေးကွက်တွင်မဆိုပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါကအထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
နံပါတ် ၂– ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပါ
မည်သည့်စျေးကွက်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါစေအကောင်းဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုမှာအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်လည်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ၎င်းသည်အတိတ်ကအမှားများမှသင်ခန်းစာယူခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီအားနည်းဗျူဟာအသစ်များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကုန်သည်များအသုံးပြုသောစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခံရသည့်နည်းစနစ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းသွားမည်။
HFT (ကြိမ်နှုန်းမြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်)
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုင်းတွင်သင်မည်မျှသက်တောင့်သက်သာရှိကြောင်းအကဲဖြတ်ရန်ကောင်းသည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည်ရာထူးတစ်ခုစီ၌သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်၏ ၂% ထက် ပို၍ မစွန့်စားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ၁% မျှနည်းပါးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တွင်£ 20,000 ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့ (သင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်) ထိုအရင်းအနှီး၏ ၀.၅% ထက်မပိုရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအများဆုံးမှာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်ပေါင် ၁၀၀ (0.5% x £ 100) ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောအစကိုစတင်ရန်နှင့်ဘဝကိုအာရုံပျံ့လွင့်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်ဘောလုံးကိုသင်၏မျက်လုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်အချို့ကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကုန်သွယ်မှုပြုရန်သင်မည်မျှနာရီမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလိုက်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
သူတို့ကပညာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်ဟုဆိုရာ၌ကုန်သွယ်ရေးဗဟုသုတဖြင့်သင်၏သွားကိုသွားဆွဲခြင်းသည်သဘာဝကျသည်။ မိမိကိုယ်ကိုအသိပေးရန်၊ အောက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များနှင့်အမြဲတမ်းနိုးကြားနေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်အနည်းငယ်ချမှတ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအရာသာဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်စျေးကွက်ကို လိုက်၍ ခြေရာခံရန်ကောင်းသည်၊ သို့မှသာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကသင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နံပါတ် (၃) Demo Accounts သည်သင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်
ပွဲစားပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်တစ်ရက်အရောင်းအဝယ်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ရွေးချယ်စရာကိုပေးလိမ့်မည်။ တခါတရံလေ့ကျင့်ရေး Simulator များဟုခေါ်သည်, ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးအမျိုးအစားများအတွက်ကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်သရုပ်ပြအကောင့်ရှိပါတယ်။
Demo အကောင့်များကိုခေါက်။ မရချေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်တစ်ပြားတစ်ပြားမျှမသုံးဘဲတန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ကြိုးစားရရှိထားသည့်ငွေနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
ကုန်သည်အသစ်များအတွက်အစမ်းလေ့ကျင့်ရန်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသော်လည်းသရုပ်ပြအကောင့်များသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်နေ့သစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ၎င်းသည်မည်သည့်အရင်းအနှီးကိုမျှမစွန့်လွှတ်ဘဲအောင်မြင်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ သရုပ်ပြအကောင့်များသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးကွက်အခြေအနေကိုထင်ဟပ်စေသည်။
နံပါတ် (၄) - သုတေသနနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သတင်းများ
အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းရရှိရန်သင်၏ဘဏ္assetsာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဘဏ္newsာရေးသတင်းများကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဇယားများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ခြင်းသည်သင့်အားတစ်နေ့တာကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်ရန်အစွမ်းထက်သောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဈေးတက်မည်၊ မကျမည်ကိုခန့်မှန်းသောအခါ၎င်းကသင့်အားအားသာချက်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်၏နောက်ရွေ့လျားမှုကိုစီစဉ်ရန် - သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌သင်ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးသည်သာကူညီလိမ့်မည်။
ထရေးဒင်း Software များ
နေ့ကုန်သွယ်မှုမှအလုပ်အကိုင်ရလိုသူတိုင်းအတွက်ခေတ်မီသောဆန်းစစ်လေ့လာသည့်ကိရိယာများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါတို့အစောပိုင်းကအတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းမွန်သောနေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသည်သင့်အားသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအများဆုံးရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းရဲ့ရာထူးကိုဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။
နေ့ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့်အသုံးအများဆုံး software package တစ်ခုမှာ MetaTrader4() ။MT4) ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင်နှင့်သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အကောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင်တည်ရှိပြီးသင့်အားကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုလက်လှမ်းမီစေသည်။ ၎င်းတွင်ဇယားဖတ်ခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းကိရိယာများ၊ စျေးနှုန်းဇယားများ၊ အမိန့်စာများနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစက်ရုပ်များတပ်ဆင်နိုင်စွမ်းတို့ပါဝင်သည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် 'T' အတွက်သင်္ချာပရမ်းပတာသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့ကုန်သည်များသည်မျက်တောင်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲကုန်သွယ်မှုအတွက်နည်းပညာဆန်းစစ်မှုမရှိပါ။ စျေးနှုန်းဇယားများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများသည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပို၍ စဉ်းစားသောကုန်သည်ဖြစ်လာစေလိမ့်မည်။
ယင်းကိုကြည့်ခြင်း စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု အတိတ်ကာလမှကုန်သည်များသည်ကုန်သည်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘာဖြစ်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်ကူညီသည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စျေးကွက်စိတ်ပညာ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်သင်္ချာပရမ်းပတာသီအိုရီသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသတ်မှတ်တန်ဖိုးကိုကြည့်မထားဘူး။ ၎င်းအစားစျေးနှုန်းပုံစံများကိုခန့်မှန်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းအချက်အလက်နှင့်ပမာဏကိုစစ်ဆေးသည်။ စျေးနှုန်းနှင့်လမ်းကြောင်းပုံစံများသည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်မည်ကို အခြေခံ၍ သမိုင်းမှစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်လျှင်အကျိုးရှိမည်ဟုငြင်းခုံစရာမရှိပါ။
ကုန်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုသောနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဇယား ၃ ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် -andlestick ဇယားများ၊ ဘားဇယားများနှင့်လိုင်းဇယားများဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာအားလုံးကိုသင်၏နေ့ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မတည်ငြိမ်သော tools များ
ဆက်စပ်မှု tool ကို
ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုချင်းစီသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်သင်အထူးစိတ် ၀ င်စားသောကိရိယာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သုတေသနအချို့ကို ဦး စွာပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်။
တစ်နေ့တာကုန်သည်အဖြစ်သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနှင့်သတင်းအချက်အလက်အကောင်းဆုံးသတင်းရင်းမြစ် ၃ ခုကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
Twitter စာရင်းနှင့် Feeds များ - မယုံဘူးလား၊ sအချို့သော Forex ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းများကို twitter တွင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် Forex သည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကဤနယ်ပယ်တွင်လူသိများသောကုန်သည်များနှင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းပေးသူများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဘဏ္Juာရေးဆိုင်ရာဖျော်ရည် ဒီတစ်ခုကသင့်ကို account တစ်ခုဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၀၀% ကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက် squawk ကိုပေးတယ်။ ၁၀ စက္ကန့်နောက်ကျသည့်အချက်ကိုသတိရရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နေ့ကုန်သွယ်မှုတွင် ၁၀ စက္ကန့်သည်အမြတ်နှင့်အရှုံးအကြားခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
Online News Provider များနှင့် Blog များ - လူကြိုက်အများဆုံးဘဏ္newsာရေးသတင်းပေးသူများမှာဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဘလွန်းဘက်ဂ်၊ ရိုက်တာနှင့်ဝေါလ်စထရိဂျာနယ်တို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Forex ကုန်သည်များအတွက်လူကြိုက်များသောအခမဲ့ရွေးစရာတစ်ခုမှာ ForexFactory ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သတိပြုရန်မှာ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက်မသင့်တော်ကြောင်းနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ဇယားများအတွက် ပို၍ ကောင်းသည်ကိုသတိပြုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ကောင်းသောကောင်းသောနေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသည်အိမ်စာလုပ်ရန်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်နေ့တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကို ၁၄ ရက်ကြာအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့စမ်းသပ်မှုမပြီးဆုံးမီသင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်သတိပေးချက်တစ်ခုထားရန်သတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
နယူးကာဆယ် (ယခင်က Ransquawk ဟုခေါ်သည်)
အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းများ၊ ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှု၊ မက်ခရိုစီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် Forex ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ - ကုန်သည်များအတွက်ဤမျှလေးစားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
နေ့အရောင်းအဝယ်အတွက်အလွန်ကောင်းပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကုန်သွယ်ရေး session အတွက် boot လုပ်ရန်လာမည့် dev ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများစာရင်းနှင့်အတူစျေးကွက်အကျဉ်းချုပ်ကိုနံနက်၊ မွန်းတည့်အချိန်နှင့်ညတို့တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နံပါတ် ၅– ဘယ်အချိန်မှာရပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိခြင်း
အကောင်းဆုံးကနေသင်ယူပါ။ တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှု မှနေ၍ ကောင်းမွန်သောလူနေမှုရှိသူများသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ရပ်တန့်ရမည်ကိုသဘောပေါက်ရန်တကယ်အရေးကြီးကြောင်းသိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကန့်သတ်ထားနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပါ။
စည်းကမ်းကျင့်သုံးခြင်းအပြင်အခြားကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသည်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောဆုံးရှုံးမှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီအားလုံးလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ် ဦး Trailing Stop အသုံးပြုခြင်း
တစ် ဦး ကရပ်တန့်မိန့်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တိကျတဲ့စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ဆိုလိုသည်။ ထပ်မံ၍ သင်ဝယ်သည်ဖြစ်စေရောင်းသည်ဖြစ်စေထိုဈေးထက်မပိုနိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ရှည်လျားသောအနေအထားရှိလျှင်သင်၏စျေးနှုန်းကိုလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်ကျော်လွန်အောင်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်ဆက်လက်သွားပြီးလက်ရှိစျေးနှုန်းအောက်တွင်ရပ်နားရန်အမိန့်ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင်၏အနေအထားကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသောအခါအရာအားလုံးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်၎င်းကိုလက်ဖြင့်ပိတ်လိုက်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အမှာစာနှစ်မျိုးစလုံးသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ဘဏ္kerာရေးအကျိုးအမြတ်ကိုရယူရန်နှင့်သင်၏ပွဲစားထံမှရန်လိုသော margin ခေါ်ဆိုမှုများကိုကန့်သတ်ရန်အတွက်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နံပါတ် ၆– ကုန်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသတိပြုပါ
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် 'ask' စျေးနှုန်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့ 'offer' စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကပြန့်ပွားတာပါ။ ရေတိုတွင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအရွှေ့သည် အရေးမကြီးပါ၊ သင်၏ပွဲစားသည် ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းကို ဆက်လက်ရရှိနေလိမ့်မည်။ အခင်းသည် 'အဖြစ်'၊PIP' သည် အများအားဖြင့် စျေးနှုန်း၏ နောက်ဆုံးဒဿမအမှတ်ဖြစ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာများ၏ ၀ ယ်ဈေးသည်ပေါင် ၂၀၀.၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ တူညီသောစတော့ရှယ်ယာများ၏ရောင်းဈေးမှာပေါင် ၂၁၀.၀၀ ဖြစ်သည်။ ပြန့်ပွားမှု (ရာခိုင်နှုန်းခြားနားချက်) ၀.၅% ရှိသည်။
အကယ်၍ ကုန်သည်သည်တူညီသောစတော့ရှယ်ယာတွင်လေလံဆွဲပြီး£ 201 ကိုပေးလျှင်သင်£ 200.00 ကိုသာတောင်းနိုင်သည်။
ဒီမြင်ကွင်းမှာအမြတ်အစွန်းအနည်းဆုံး ၀.၅% ရအောင်လုပ်ရမယ်။ ကြောင်းအထက်မှဘာမှအမြတ်အဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးတွင်အထူးသဖြင့်ပြန့်ပွားခြင်းသည်သင်၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်ပါကပြန့်ပွားမှုသည်သင်၏အလားအလာရှိသောအကျိုးအမြတ်ကိုမျိုချနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတော်တော်များများကတကယ်တော့ ၀% ကော်မရှင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တယ်။ သင်ပေးမည့်ကော်မရှင်မရှိခြင်းအတွက်အချို့သောပလက်ဖောင်းများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားမှုအပေါ်ကော်မရှင်၏အခကြေးငွေကိုအမြဲတမ်းချိန်ခွင်။
ကော်မရှင်အခကြေးငွေများကောက်ခံသည့်အခါ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သည့်အခါသူတို့သည်ပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။
ထုတ်ယူ / ငွေသွင်းခ
သင်ငွေသွင်းရန်သင်ရွေးချယ်မည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သို့သင်၏ရန်ပုံငွေများမရောက်ရှိမီတစ်ခါတစ်ရံနာရီနှင့်ရက်အကြားကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ့အတွက်ချက်ချင်းငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ ဥပမာ - ဒက်ဘစ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အီး - ပိုက်ဆံအိတ်။
နံပါတ် ၇– သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအချိန်ဇယား
သူတို့ကအချိန်ကိုက်အရာအားလုံးကပြောပါတယ်။ စျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည့်အရာတစ်ခုမှာကုန်သွယ်ရေးနေ့စတင်သည်နှင့် (နံနက်ယံ၌ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်) ပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းမှာယူသည့်အမိန့်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်များသည်ပုံစံများကိုမှတ်မိလေ့ရှိတတ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါကပထမ ၂၀ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှမပြုလုပ်ဘဲစျေးကွက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
နံပါတ် ၈– Niche တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုကပ်ပါ
တစ်နေ့ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများပြားစွာရှိသည်။ သင်ကုန်သွယ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစာရင်းပြုစုရန်ကောင်းမွန်သောနေ့ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤသည်မှာအနည်းငယ်ဖော်ပြရန် (forex၊ stock, cryptocurrencies သို့မဟုတ် metall) ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျယနေ့အရောင်းအဝယ်လို့မှအတော်လေးအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသင်တစ် ဦး ချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းမှာသေးငယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်နှင့်သာစတင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်ခြေရာခံရန်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ခေါင်းကိုမ ၀ င်မိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သေးငယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုအနည်းငယ်သောအရာများကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏ဘဏ္attentionာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်စျေးကွက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ သင်၏နယ်ပယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်သင်ပိုင်ဆိုင်ထားသောပစ္စည်းများကိုစွဲမြဲစွာထားခြင်းကသင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းအားအားလုံးကိုလေ့လာသင်ယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရာရာတိုင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအထူးပြုရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်အသစ်စက်စက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အစုရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအတွက်လူကြိုက်များလာသည်။ သို့မှသာသင့်အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အရင်းအနှီးပမာဏကိုသတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မည်။ အမှန်ကတော့, brpoker သည်ငါးပုံတစ်ပုံကဲ့သို့သေးငယ်သည့်အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
နံပါတ် 9: သင်၏နည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲရန်မကြောက်ပါနဲ့
အဲဒီမှာအတွေ့အကြုံအရှိဆုံးနေ့ကကုန်သည်တွေတောင်မှအဲဒါကိုရောထွေးပြီးနည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးချင်ကြတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး သို့မဟုတ်လေ့လာသူဖြစ်ပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အရာရာပြောင်းလဲခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်သည်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကရှေ့သို့ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်အောင်သေချာရမည်။
သိကောင်းစရာ ၁၀ - နေ့အရောင်းအဝယ်ပွဲစားကိုရွေးခြင်း
ဤအချက်အားဖြင့်သင်သည်အရေးအကြီးဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကိုယူလိုသည့်လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးထားသင့်သည်။ ကော်မရှင်၊ အနိမ့်ဆုံးနှုန်းထားများ၊ ပြန့်ပွားမှုနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှအသိပေးရန်ကူညီလိမ့်မည်
သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားသည်မည်သည့်နေ့တွင်သင့်လျော်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ယခုသင်ဆုံးဖြတ်တော့မည်။ ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင် ဦး စွာစဉ်းစားရန်အနည်းငယ်သောအရာများရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများသည်တစ်ရက်နှင့်တစ်ရက်မတူကြပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုများအများအပြားရှိသည် (ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းအများစုမှာ) ရှိသော်လည်းသင်စိတ်ဝင်စားသောနယ်ပယ်ကိုပွဲစားမှထောက်ခံကြောင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထပ်မံ၍ ဤစာမျက်နှာကိုနေ့စဉ်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာသည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းနှင့်၎င်းတို့အစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အကြံပြုသည်။
မည်သည့်နေ့တွင် ကုန်သွယ်မှုပွဲစားသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို သင်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ပလပ်ဖောင်းကို UK နှင့် EU အတွင်း အပြည့်အဝ လိုင်စင်ရထားပြီး ထိန်းကြောင်းကြောင်း သေချာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရှေ့ဆုံးမှာက အရစ်ကျလိုင်စင်ကို ကိုင်ထားတာ FCA, ASIC, CySECသို့မဟုတ် အခြားအဆင့်-တစ်ကိုယ်ထည်။
ပွဲစားကိုသေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းသည်သင်၏ရန်ပုံငွေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဥပဒေဖြင့်အကာအကွယ်ပေးသည်။ သင်သည်အရေးပါသော client ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းမှအကျိုးခံစားရမည်။
ပွဲစားအသစ်မလုပ်မီသင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ရန်အမြဲအရေးကြီးသည်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်မည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆိုသင်ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိခြင်းကသင့်ကုန်သွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုရေရှည်တွင်စောင့်ရှောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကော်မရှင်အနိမ့်ကျများနှင့်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားမှုကမ်းလှမ်းသောနေ့အရောင်းအဝယ်ပွဲစားများနှင့်ကပ်ပါ။
ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသုတေသနပြုစဉ်အထူးသဖြင့်သင်၌ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါကသင်မည်သည့်ငွေသွင်းနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
Paypal ကဲ့သို့ e-wallets များ
ဒါကြောင့်အခုသင့်မှာစဉ်းစားရန်လွယ်ကူသောနေ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ ၁၀ ခုရှိပြီဆိုလျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုအသုံးချရန်အကောင်းဆုံးပွဲစားများနှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြမည်။ အောက်ပါကြိုတင်စစ်ဆေးထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုချင်းစီသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရသည့်အခကြေးငွေများ၊
AVATrade သည် MT4 အပါအ ၀ င်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများစွာကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ၎င်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို CFDs ပုံစံဖြင့်ထားရှိသည်။ ပြန့်ပွားမှုတင်းကျပ်စွာနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဘယ်သူမျှမကုန်သွယ်ကော်မရှင်ရှိပါတယ်။ ဖောက်သည်အသစ်များသည် sign up bonus ကိုရရှိကြသည်။
နေ့အရောင်းအ ၀ ယ်သည်မည်သည့်အခါမျှစွန့်စားမှုမှကင်းဝေးလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းအစီအစဉ်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည်ဤအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ အောင်မြင်သောနေ့ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်သော့ချက်မှာသင်တတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းစွာပြောရမည်ဆိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မ ၀ င်မီကြီးမားသောစွန့်စားမှုများမပြုလုပ်မီတစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်း၏အချည်းနှီးများကိုလေ့လာခြင်း ယခုတွင်သင်သည်မည်သည့်နေ့ကုန်သည်များဖြစ်လိုသည်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိအကြံဥာဏ်အချို့ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီဟူသောရှင်းလင်းပြတ်သားသောအတွေးအခေါ်ရှိသည်။